Ọhụrụ rụọ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ Google dị ugbu a | ECommerce ozi ọma
Eva Maria Rodriguez | | Ọzụzụ ECommerce, Marketing, StartUps na ndi oru itumgbere ahia
Otu afọ na ọkara gara aga Google tụbara Na-arụsi ọrụ ike, a free ọzụzụ ikpo okwu na-gụnyere ihe na-akpali ndepụta nke ihe ọmụmụ weebụ na ahia, eCommerce na ndi oru itumgbere ahia. Ọrụ ahụ gụnyekwara ọzụzụ ihu na ihu na obodo dị iche iche nke Spain.
Mee ọ rụọ ọrụ gị bụ ihe ịga nke ọma na-agbasa ma na-emeziwanye. Nke a bụ Google, na-achọkarị ihe. Ma dị ka ihe ịrịba ama nke usoro mmelite a na-aga n'ihu, ụbọchị ole na ole gara aga, Mee ọ rụọ ọrụ webụsaịtị ọhụrụ. Ka anyị lee!
1 Na-arụsi ọrụ ike, nzọụkwụ mbụ iji ruo ihe mgbaru ọsọ gị
2 Usoro ọrụ na-arụ ọrụ n'efu
2.1 Rụọ ọrụ ihu na ihu
2.2 Rụọ ọrụ ịntanetị
Na-arụsi ọrụ ike, nzọụkwụ mbụ iji ruo ihe mgbaru ọsọ gị
Nke a bụ otu usoro ọzụzụ dijitalụ nke Google si achọ ịdọta uche anyị, na-echetara anyị nke ahụ "Ọdịnihu nke ọrụ dị na ụwa ịntanetị", na ihe na-echere gị bụ "ụwa jupụtara na ohere ebe ị ga - enweta ihe ọ bụla ị kpebiri."
Maka nke a, Google na-atụ aro ka anyị bido ọzụzụ na nkuzi ya wee bụrụ a #Arụ ọrụ. Ihe a hashtag yiri ka ọ na-arụ ọrụ.
Usoro ọrụ na-arụ ọrụ n'efu
Ihe ọmụmụ niile enyere na rụọ ọrụ bụ n'efu ma na-enye asambodo mgbe emechara ya, ma ha dị n'ịntanetị ma ọ bụ na ha. Ndị a bụ ọmụmụ ị nwere ike ịchọta.
Rụọ ọrụ ihu na ihu
Omume ihu na ihu bụ Actívate nke IAB Spain nyere ikike Na, dị ka anyị kwuru na mbụ, ha bụ ndị free.
Usoro nhazi na Digital Marketing
Oge: awa 40 n’ime ụbọchị ise
N'ime usoro a, ị ga-amụta ihe niile gbasara Digital Marketing iji nyere gị aka n'ịchọ ọrụ gị ma ọ bụ ịmalite azụmaahịa gị. Ọ gụnyere ọdịnaya dị na ntọala nke teknụzụ, SEO, SEM, nchịkọta weebụ, azụmahịa kọmputa, RRSS, ngwaọrụ mkpanaka, ọchụnta ego, wdg.
Ga-arụ ọrụ dịka otu ma mụta ihe site na ndị ọkachamara kachasị mma na mpaghara ahụ.
Usoro pụrụ iche na Digital Marketing
Oge: Oge 120 n'ime izu atọ sochiri
Usoro a chọrọ ịgbasa ma mikwuo akụkụ dị iche iche akọwapụtara nke gburugburu ebe obibi dijitalụ nke dị mkpa iji chọta ọrụ na ngalaba ma ọ bụ ịmalite azụmaahịa gị.
Usoro a ga - etolite isiokwu ndị a na usoro - usoro: Ngosipụta na Buzụta Mgbasa Ozi, SEO na SEM Search Engines, E-Azụmaahịa na Ahịa Ahịa, Social Networks na Video, Mobile Marketing and Measurement, Attribution na Digital Analytics.
Ọzụzụ reprenezụ ahịa
Oge: awa ịkpọtụrụ 21
Ebumnuche nke ọzụzụ a bụ inwe ezigbo ahụmịhe nke onye mbụ na gburugburu mmụta atọ dị ukwuu ịbụ onye ọchụnta ego: onye ọrụ, ndị otu na nsonaazụ ya.
Rụọ ọrụ ịntanetị
Mee ọ rụọ ọrụ na ntanetị n'efu ụlọ ọrụ dị iche iche kwadoro ya. Ndị a bụ nkuzi dịnụ:
Usoro ntanetị na Digital Marketing
Ga-amụta ihe ndị bụ isi nke Digital Marketing iji melite profaịlụ ọkachamara gị.
Ọ gụnyere ọdịnaya dị na ntọala nke teknụzụ na ụwa dijitalụ, SEO, SEM, e-commerce, ahia na netwọkụ mmekọrịta na ngwaọrụ mkpanaka, nchịkọta weebụ yana ọchụnta ego.
Ga-amụta otu esi eme atụmatụ azụmaahịa ma ọ bụrụ na n'ọdịnihu ịchọrọ ịmepụta ụlọ ọrụ gị.
Ndi IAB Spain kwadoro ya.
Usoro ntanetị na Nchịkọta Weebụ
Ga-amụta ịkọwa ma nyochaa data okporo ụzọ nke weebụsaịtị gị.
Ga-achọpụta ọdịnaya nke kachasị leta ma kpalie mmasị kachasị n'etiti ndị ọrụ gị ma ọ bụ ndị ahịa gị.
Ga-amata ihe ọnụọgụ ọnụọgụ nleta na ibe ọ bụla yana ihe a niile, chepụta atụmatụ azụmaahịa ọhụrụ gị.
Akwụkwọ nke Schoollọ Akwụkwọ nke Industriallọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ (EOI).
Usoro ntanetị nke Ahịa Electronic
Ga-amụta ịgbanwe azụmahịa ọdịnala ka ọ bụrụ azụmahịa n'ịntanetị ma ọ bụ bido echiche nke gị n'ime ụwa ịntanetị na saịtị nke gị.
Ga-achọpụta otu esi zụta ma ree ngwaahịa na ọrụ dị na weebụ. Iji usoro a n'efu, mebie ókè ma rute ndị ahịa ọhụrụ.
Agụmakwụkwọ Development Online
You ga-amụta ihe ndị bụ isi na echiche iji mepụta ngwa maka ekwentị mkpanaaka.
Usoro a na-ewepụta ụkpụrụ ndị dị mkpa nke kwesịrị ịkwalite okike nke ngwa ndị a, wee nwee ike ilekwasị anya na nhazi na mmemme ha nke ọma site na mmalite.
Akwụkwọ nke Complutense University nke Madrid.
Comgwé ojii Computing online N'ezie
Ga-achọpụta n'ime usoro ọmụmụ a niile otu esi agbanwe azụmaahịa ma mepụta ihe ọhụrụ n'ime ụlọ ọrụ gị ma na-ebelata ụgwọ.
You ga-amụta otu esi enweta ozi gị na ngwaọrụ ọ bụla yana nchekwa.
Akwụkwọ nke Schoollọ Akwụkwọ nke Industriallọ Ọrụ Mmepụta.
Agụmakwụkwọ Web Development Online (I)
A ga-ewebata gị n'ibe akwụkwọ weebụ na ụzọ ọkachamara. N’akụkụ nke mbụ nke ọmụmụ a, ị ga-amụta otu esi mụọ Web yana otu o siri bụrụ ihe dị taa.
Will ga-enwe ike ịmepụta web peeji nke ziri ezi n'ụzọ ọkachasị eji HTML5.
Ndi IEI nke Mahadum Alicante kwadoro.
Usoro ntanetị na Nrụpụta Onwe Onye na Oge Oge
Ga-amụta ngwa ọrụ na usoro ga - enyere gị aka ịmị mkpụrụ karịa ị na-achọ ọrụ ma ọ bụ ịmalite ọrụ.
A na-eji ya maka ndị ọrụ na-amalite ịmata ngwaọrụ ndị a.
Ndị Santa María la Real Foundation kwadoro ya.
Entzọ ọchụnta ego n'ịntanetị
Y’oburu n’inwe oru ngo n’amaghi ebe ibido, uzo a n’enye gi aka gha egosiputa gi ahia nke ndi oru itumgbere ahia ya, ebe ichoputara otu esi agbanwe echiche gi n’eziokwu.
Maka ozi ndị ọzọ gaa na www.edum.jg
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọzụzụ ECommerce » Ọhụrụ rụọ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ Google na-arụ ọrụ ugbu a